माेटरसाईकलले लग्याे टाउकाे काे आघा खाेपडी, छाेराछाेरी डराएर परपर भाग्छन्
Home/ भिडियो/माेटरसाईकलले लग्याे टाउकाे काे आघा खाेपडी, छाेराछाेरी डराएर परपर भाग्छन्
मोरङ्गको उर्लाबारी अस्थाई बसोवास भएका सितल राईको जिवत जसो तसो गर्दै चलेकै थियो । ३ छोरी र श्रीमती खुसी थिए र छोरीहरुलाई डाक्टर बनाउने सपना थियो तर सितलको जिवनमा पुस १८ गते कालो दिन भएर आयो । उन्लाई काल बनेर एब मोटरबाईकले नराम्रोसंग ठकर दियो र आज उनको टाउकोको आघ खोपडी छैन् । उनी भन्छन स्वर्ग तिर जाँदै थिए उठदा हस्पिटलको बेडमा थिए ।
केही समय अघि विदेश बसी थोरै धन कमाएर नेपालमै केही गर्छु भनी फर्केका सितलको आज यो हालत छ । दुर्घटना भएको धेरै समयपछी बोल्न सुरु गरेका सितलले होस खुलेपछी श्रीमतीलाई चिन्ता नगर ठिक भएपछी म पाल्छु भनेर कापीमा लेखेका रहेछन् । ठूलो छोरीलाई बहिनीहरुको ख्याल राख्नु भन्छन रे ।
आर्थीक अभावको कारणले आफ्नै खोपडी लगाउन पाएका छैनन् सितलले । विर्तामोडको बि एन सी अस्पतालमा उन्को खोपडी राखीएको छ । सीतलको परीवारमा घर धान्ने उ मात्र थिए । आज उस्को परीवार धेरै ठूलो रीणमा डुबेको छ र आर्थीक अभावका कारण शरीरपनी अधुर अपुरो छ । के हामी सबै मिली उनलाई थोरै सहयोग गर्न सक्दैनौर । भिडीयो धेरै भन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला ।
रिचाको फिल्मको प्रेस मिटमा गएर रिचाकै खेदो खने दिपकले, मुन्द्रेले गरे यस्तो व्यङ्ग्य (भिडियो)
श्रीमानबाटै ज्यान मार्ने धम्कि आयो भन्दै जापानबाट चेली रुदै काठमाडौँ पुगिन ! (हृदयविदारक भिडियो)
गोरेको घरमा रुवाबासी ! गोरेका बुवा–आमा के भन्छन् ? (भिडियोसहित)